ကျနော်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဖြစ်ကွာ Valentine Day ကိုအနေဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရွှေ့ဖို့အချိန်ရှိသည်, တဖန်ဆောင်ပုဒ်အပေါ်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ညှဉျးဆဲ "ဘယ်လိုလက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့နဲ့ကိုခစျြရနိုင်သနည်း" ခဲ့ပါဘူး။ သငျသညျဖဖျောဝါရီလ 23 ရက်နေ့တွင်ချစ်ရာသခင်သည်သာယာသောဖြစ်လတံ့သောအရာကိုဆုကြေးဇူးကိုဆုံးဖြတ်ရှေ့တော်၌ထိုကောင်လေးစစ်မှုထမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်တတ်နိုင်ခဲ့လျှင်သို့သော်များစွာသောမိန်းကလေးငယ်တစ်နည်းနည်းနဲ့, သင်သည်ဤအားလပ်ရက်ဖို့တစ်ခုခုပေးနိုင်ပါသည်ရှိမရှိသံသယ။ လိုပဲ, အဘယ်ကြောင့်သူယူနီဖောင်းအပေါ်ကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှတဲ့အခါမှာအနှစ်သက်ဆုံးဖေဖော်ဝါရီလ 23, ဂုဏ်ပြု? တကယ်တော့ဤမေးခွန်းကိုသံသယကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့, ရီစရာဖြစ်တယ် "လက်ဆောင်တွေတူသောယောက်ျားလျှင်အဖြစ်?" ။ ဒါဟာစက်၏လက်၌စောင့်ရှောက်ရန်စွမ်းရည်ကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်ကိုသဘောတူသည်မဟုတ်လော ဒါကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရက်နေ့ကဒီအခမ်းအနားနဲ့ဂုဏ်ပြုလွှာမှာအကြိုက်ဆုံးလက်ဆောင်တွေကြဲသည် "နေစဉ်ပွဲစဉ် lit ။ " ဟုသူကဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါဘူးရင်တောင်နိုင်ပါတယ်နှင့်ဖြစ်သင့်
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သောဆုကြေးဇူးကိုရှေးခယျြ - အခြားကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ၏သင်တန်းက banal Cologne နှင့်ကိုအသုံးပြုပြီးရှောင်ရှားရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်, သင်၏အကြိုက်ဆုံးဖန်တီးမှု, ဖြစ်ကောင်းရင်းနှီးသောဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်စေလျက်, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရှည်လျားသောရချင်တယ်ခဲ့ရာပေးလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, ဖေဖော်ဝါရီလ 23 မတိုင်မီအပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာဦးနှောက်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများပါဝင်သည်နှင့်ပြည့်စုံပျော်ရွှင်မှုကိုများအတွက်ချို့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးနေကြသည်သူမကလတ်တလောအကြိုက်ဆုံးကပြောသည်။ အဘယ်အပေါငျးတို့သမကြာသေးမီဆွေးနွေးချက်လောကဓာတ်ကိုသတိရတစ်ဦးသင့်လျော်သောဆုကြေးဇူးကိုရွေးချယ်ပါ။ အလိုဆန္ဒ၏အတော်ကြာတ္ထု, ထို့နောက်အကောင့်ထဲသို့ချစ်ရာသခင်၏ဇာတ်ကောင်ယူလျှင်။ ဥပမာအားဖြင့်သူသည်ကားထဲတွင်အရာအချို့ကိုမျိုးလိုအပ်ပေမယ့်လည်းဖျော်ဖြေရေးအပေါ်သူငြင်းဆန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်အကြိုက်ဆုံးရင်ခုန်စရာပါကသူ့ကိုအကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ, လက်ျာအရာပေးရသည် သာ. ကောင်း၏, သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူသုံးစွဲသည့်အချိန်အာရုံ၏ပစ္စည်းအထောက်အထားထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောကြောင်းတံဆိပ်ခေါင်းသားတို့သညျမိမိကိုမိမိရပါလိမ့်မယ်။
ပင်မှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြားတဲ့ခစျြတျောမူဘာမှလျှင်အဘယ်သို့ပြုသနည်း ၏သင်တန်း, ရုတ်တရက်လိုချင်သောအကြောင်းကိုပဲဖိတ်သည်, မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုဒါမှမဟုတ်လာမည့်တနင်္ဂနွေအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်း။ ဒီခဲ့ကြောင်းအောင်မြင်ဖို့မပါဘူးဆိုရင်, ထိုငျသညျသဘာဝကျကျသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးများနှင့်ဝါသနာဖို့သတိထားရမှာ, ဆင်ကန်းတောတိုးလက်ဆောင်ကောက်ဖို့ရှိသည်။
အတော်များများကယောက်ျားသူတို့ကိုအမျိုးမျိုးချစ်ခင်အမည်ဝှက်နှင့်အတူတက်လာမယ့်, အအစွမ်းကုန်နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်အတူသူတို့၏ "သံမြင်းများ" ဆက်ဆံပါ။ ကားမှလက်ဆောင်ဆက်ဆက်သင်ချစ်တဦးတည်းကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အိုးနှင့်သင်၏လူတဦးတောက်ပထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝါသနာ, ငါးဖမ်း, ကွန်ပျူတာများ, အားကစား, ဒီစီးရီးရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုရှိလျှင်, သူ၏အရသာရှိသည်ဖို့သေချာသည်။
မည်သူမဆိုမိမိအချစ်ရာသခင်၏သဘောသဘာဝကိုသိနိုင်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်မယ့်လက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူစိတ်တော်ထက်သင်ပို။ သူဟာအရသာရှိတဲ့မုန့်ညက်တစ်ဦးကိုနှစ်သက်ပါသလဲ ထိုအခါအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများနှင့်အတူအထူးညစာအလွန်အမင်းသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားခံရဖို့သေချာသည်။ ရုံအစားအစာကနေအပျြောအပါးလာပြီအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအမြင်အာရုံအမြင်ကစားသတိရပါ။ ဒါကြောင့်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဟင်းလျာများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အခန်း။ ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့ယောက်ျားသည်အနုစိတ်စာအုပ်-မြင်ကွင်းများခံစားသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်အသစ်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအချိန်ဖြုန်းဖို့ချစ်သောသူ, ဒါမှမဟုတ်သူ့အဘို့တခါထပ်ဂီတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနားမထောင်ဖို့ထက်ချိုဘာမျှရှိသလော ပြီးတော့သင်သည်တစုံတခုကိုတီထွင်ရန်မလိုပါ, စာအုပ်တစ်အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ (အမျိုးအစား) ဖြစ်ပါတယ်, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဂီတနှင့်အတူ disc ကိုသူ့အဘို့ကောင်းသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျ, အတူတကွတနင်္ဂနွေဖြုန်းမြို့အထွက်တစ်နေရာရာကိုသွား, ဒါမှမဟုတ်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများသင်အကြိုက်ဆုံးထောက်ခံသူအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလိုချင်ပြီလော ထိုအခါသင်သည်သူ့ကိုပေးဖို့အတိအကျသိကြ၏။ တစ်ဦးလေထီးနှင့်အတူခုန်ဖို့ကိတ်ကွင်းမှပူးတွဲခရီးစဉ်မှရွေးချယ်မှုများ၏ဒြပ်ထု။
ဤသည်ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရက်နေ့တွင်သူမ၏ယောက်ျားသည်စိတ်တော်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းပစ္စုပ္ပန်အတွက်အဓိကအရာ, သူ၏ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမဟုတျပါဘူး။ ဒါကြောင့်ထိုနေ့၌ရငျးနှီးအတွက်ရေချိုးရန်, ဖွင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့ယောက်ျားသည်ကုန်အံ့။ အကြိုက်ဆုံးဆုကြေးဇူးကို၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ sexy အတွင်းခံတစ်ခုသို့မဟုတ်သူနာပြုဝတ်စုံအဖြစ်သင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ပါစေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ကနေခန့်မှန်းရန်မလွယ်ကူသင့်ရဲ့အားလပ်ရက် menu ကိုဖွစျလိမျ့မညျပေါ်မှာ။
လူမျိုး '' ချစ်ကြည်ရေးပွဲတော်
ဖေဖော်ဝါရီလ 14 ရက် Valentine Day ကို
စက်တင်ဘာလ 1 လက်ဆောင်ပေးမယ်စိတ်ကူးများဆရာ,
အာလူးနဲ့ Meatless ဖက်ထုပ်
San Miguel de Velasco ၏ဘုရားကျောင်း
တစ်ဦး fitball ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကော့စတာရီ - ဆွဲဆောင်မှုများ